အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Yarzaryeni - ဝီကီပီးဒီးယား
မင်္ဂလာပါ Yarzaryeni။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Dr Lotus Black (talk) ၁၅:၅၁၊ ၂၈ နို​ဝင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
How about special relativity theory that need to be translated in Myanmar?
Dr Lotus Black (talk)  ၀၇:၀၉၊ ၁၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
General Relativity ကိုတော့ အစပျိုးထားတာရှိတယ် Bro.. ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ Article တွေရဲ့ Intro တွေကို လိုက်ပြန်နေတယ်.. ကိုယ်တိုင်က ဝီကီကို သိပ်မကျွမ်းသေးတာလဲပါတယ်.. ကျကျနနပြန်ဖို့ အချိန်ပေးပြီး အရင်ဖတ်ဖို့ လိုတာလဲပါတယ်.. နောက်ပြီး Terms တွေကို စာလုံးပေါင်း တစ်ယောက် တစ်ပေါက်ပြန်နေတာ ဖြစ်မှာစိုးလို့ အရင် Frame လိုက်တည်ထားချင်တာလဲပါတယ်.. Bro ကော ဘယ်လိုမြင်လဲ .. Yarzaryeni (talk) ၁၅:၂၉၊ ၁၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
ကောင်းပါတယ် ဘရို ကျွန်တော်က ရူပဗေဒဘက် Mode သိပ်မပါလို့ အဲဘက် မလှည့်ဖြစ်သေးဘူး။ Dr Lotus Black (talk) ၀၁:၁၁၊ ၁၆ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
Linking to other wikipedias.[ပြင်ဆင်ရန်]
Languages at left lower corner⇒Add links⇒ Language:English (enwiki)⇒Page:xxxxx⇒link with page⇒Comfirm. This is how we link pages between Myanmar and other Wikis. တိမ်းပလိတ်နာမည်တွေဟာ Interwiki ချိတ်မထားရင် မြန်မာလိုပေးထားတော့ ပြန်ချိတ်ဖို့ လိုက်ရှာရတာ အခက်တွေ့ပါတယ်။ မရှိသေးဘူးထင်ပြီး နောက်တစ်ယောက်က အသစ်လုပ်လုက်တော့ ထပ်ပြန်ရော။ ဒါကြောင့် wiki link ချိတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ☺ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၂၁၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျေးဇူးဘရားသား၊ ချိတ်လို့ရမှန်း ကျွန်တော်မသိလို့၊ လုပ်လိုက်ပါမယ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Yarzaryeni&oldid=431021" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၉:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။